Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka a hụ gị n’anya, hụ gị n’anya. - Seneca - Pedia na-ekwu okwu
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka a hụ gị n’anya, hụ gị n’anya. - Seneca
Lovehụnanya bụ ihe kacha mkpa na ndụ anyị, tinyere obi ụtọ. Ihe abụọ a na - ejikọ onwe ha. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ mmadụ n'anya, ị gaghị enweta obi ụtọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta obi ụtọ, ị kwesiri ịgbasa ịhụnanya ka ike gị niile.
Anyị maara na mgbe ụfọdụ ọ na-esi ike ịhụ mmadụ n'anya n'ihi ọnọdụ ahụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnwere ike ịhụ mmadụ n'anya, enwere ike na ọ ga-agwọ. Ọ dị mma ịmara na ịhụnanya bụ onye na-agwọ ọrịa kachasị mma n'ụwa a na ịhụnanya n'akụkụ gị ị nwere ike ime ka ndị mmadụ nwee ọ happyụ yana afọ ojuju.
Ọzọkwa, ị ga-enweta obi ụtọ na afọ ojuju. Otu ọ dị, ọ bụ otu n’ime ihe ọtụtụ n’ime anyị chọrọ. Enweghị ịhụnanya, odighi adị na ndụ anyị. Yabụ, mgbe ọ bụla inwere ohere ịhụ mmadụ n'anya, ịpụghị iche na nke ahụ.
Otu ihe ị ga - ebu n’uche bụ na ọ bụrụ n’ịchọrọ mmadụ ịnata ịhụnanya, ị ga-ahụkwa ha n'anya. N’enyeghị ịhụnanya, ị gaghị atụ anya ịhụ mmadụ n’anya. Ọ bụ ihe anyị ga-eji gbanwere onwe anyị. N’ihi ya, akwụsịkwala ịhụ mmadụ n’anya.
Agbanyeghị, ọ ga - abụ nhọrọ kachasị mma maka gị ma ọ bụrụ na ịnweghị atụ anya ihe ọ bụla site na ịhụnanya. Someonehụ mmadụ n'anya na ịtụ anya ịhụnanya ọ bụghị ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na onye ahụ emeghị hụ gị n'anya ọzọ, ọ ga-emebi obi gị. Ma ịgaghị enwe nchegbu banyere ihe ọ bụla dịka ọ bụ usoro nke ndụ na ọ bụrụ na i nwee ịhụnanya n’ebe mmadụ nọ, ị ga-enweta ya.
Yabụ, ị ga - ahụ na ịhụnanya bụ ihe kacha mkpa na ndụ anyị. Ọ bụ maka udo, obi ụtọ, na afọ ojuju anyị. Ikwu eziokwu, ihunanya bu ihe anyi ga eche. Ọ ga - enye gị ihe ncheta ị ga - echekwa ndụ gị niile.
Ima ima ima ndise ye mme ekikere ye ikọ
Lovehụnanya Na-atọ ụtọ
Ezi ihunanya kwuru
Agaghị anyụpụta mkpụrụ akụ́kụ́ n'eseghị okwu ma ọ bụ mee ka mmadụ zuo okè n'enweghị ikpe ọ bụla. - Lucius Annaeus Seneca
Agaghị anyụpụta mkpụrụ akụ́kụ́ n'eseghị okwu ma ọ bụ mee ka mmadụ zuo okè n'enweghị ikpe ọ bụla. - Lucius Annaeus Seneca metụtara…